कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? यस्ता छन् मनोबैज्ञानिक कारणहरु — onlinedabali.com
पछिल्लो समय ह.त्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन। कोरोनाको कहर र लकडाउनको बिचमा पनि यौन हिंसा, ब लत्कारका घटनाहरु बढेर गएको देखिन्छ। भखरै मात्र बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलत्कार पछि हत्या भयो ।
बलात्कार सामाजिक समस्या हो । एउटा गम्भीर तथा जघन्य अपराध हो । राजनीतिक मुद्दाको बिषय होइन । अपराधीलाई सजायको ब्यबस्था कानुनले स्पष्टसँग गरेको छ । मुत्यु दण्ड बा कडा कानुनले मात्र यस्तो अपराध कम हुन्छ भन्न सकिँदैन । नेपालको संविधान र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले गरेका संधि सम्झौताका आधारमा पनि मुत्यु दण्डको कानुन बनाउन सकिदैन । यसको लागि शिक्षा , चेतनाको बिकास नै उतम उपाय हो ।
यसका पछाडिको मनोबैज्ञानिक कारणहरु केके हुन सक्छन् ?
असामाजिक ब्यक्तित्ब : जसलाई साईकोपाथ भनेर पनि भनिन्छ । ब्यक्तित्बसगँ सम्बन्धित यस्तो मानसिक समस्या भएका ब्यक्तिले आफ्नो घरपरिबार र समाजमा जो सुकैलाई पनि दुख दिने , सानो सानो कुरामा पनि ठूलो बदला लिन खोज्ने, हत्या, बलात्कार गर्न समेत पछि नपर्ने जस्ता कानुनले बर्जित गरेका जघन्य अपराध गर्न सक्छन ।
यौनको लत : यौनको लत लागेका ब्यक्तिहरु यौन प्रति अति नै आशक्त हुन्छन । उनीहरुमा कहिल्यै यौनको प्यास मेटिदैन । यस्तो खालको यौन समस्या भएका ब्यक्तिहरुले यौनको तिर्खा मेटन आफन्त, बालबालिका केही पनि नभन्न सक्छन । बलात्कार गर्न समेत पछि पर्दैनन् ।
अप्राकृतिक यौन व्यवहार : जो व्यक्तिले यौनलाई सम्भोगको रुपमा भन्दा स्खलनको माध्यम बनाउछ , उनीहरुले अरुको भावना बुझ्न सक्दैनन र स्वभाबिक यौन व्यवहार गर्न पनि जान्दैनन् । यस्ता ब्यक्तिले बलत्कार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
नैतिक पतन : नैतिक रुपमा पतन भएका ब्यक्तिले पशु भन्दा तल्लो स्तरको ब्यबहार गर्न सक्छन । यस्ता नैतिक रुपमा पतन भएका ब्यक्तिहरुबाट आफन्त पनि बलात्कारको सिकार हुन सक्छन् ।
यौन कुण्ठा : अबिबाहित, श्रीमतिबाट यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेको, यौन कुण्ठाले भरिएको ब्यक्तिले पनि बलात्कार गर्न सक्छ ।
पोनोग्राफी र साईबर सेक्सको लत : पोनो ग्राफीमा बाबुले छोरीसँग यौन सम्पर्क , दाजुले बहिनिसँग शारिरिक सम्बन्ध, भन्नेजस्ता टाईटलमा अस्लित भिडियो धेरै भेटिन्छन। यस्ता कुरा धेरै हेर्न तथा यी कुराको लत भएको व्यक्ति नैतिक रुपमा पतन हुने सम्भावना हुन्छ । यस्ता कुराहरुबाट यौन शिक्षा बटुलेका किशोर किशोरीमा यौन बिचलन समेत आउन सक्छ ।
मानसिक रोग : मेनिया वा उन्माद नामक कडा मानसिक रोग लागेको ब्यक्ति सधै उत्तेजित हुन्छ ।उसको व्यवहार र बिचार अव्यबहारिक र अनौठो किसिमको हुन्छ । झट्ट हेर्दा उ रोगी जस्तो देखिदैन । उसमा आत्मबल, जोस शारीरिक शक्ति बढेर आउँछ । यौनको आबेग पनि तिब्र् हुन्छ। जुनसुकै बेला र जो सुकैसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छ । यौनको आवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यस्ता व्यक्तिबाट बलात्कारका घटना समेत हुन सक्छ ।
अति बिश्बास गर्नु : घर परिबारका सदस्य तथा आफन्तहरु बिच चाहिने भन्दा बढि घनिष्टता हुनु , अरुलाई अति नै बिस्बास गर्नु तथा नाता – सम्बन्ध अनुसारको व्यवहार गर्न नजान्नु र यौनको मामिलामा अनुशासन र दायरा भित्र बस्न नजान्दा पनि हाडनाता करणीका घटना हुन पुग्छन।
यौन अनुशासन नहुनु : यौन अनुशासन नभएको , पतित , बिखण्डित तथा चरित्रहिन घर परिबार र समाजमा हुर्केको बच्चा पनि पछि गएर यौनमा बिचलित हुन सक्छ ।